Izindaba - RFID ulwazi oluyisisekelo
1. Iyini i-RFID?
I-RFID isifinyezo se-Radio Frequency Identification, okungukuthi, ukuhlonza ifrikhwensi yomsakazo. Ivamise ukubizwa nge-inductive electronic chip noma ikhadi le-proximity, ikhadi le-proximity, ikhadi okungelona lokuxhumana naye, ilebula ye-electronic, ibhakhodi ye-electronic, njll.
Uhlelo oluphelele lwe-RFID luqukethe izingxenye ezimbili: I-Reader ne-Transponder. Umgomo wokusebenza ukuthi i-Reader idlulisela imvamisa ethile yamandla amaza omsakazo angapheli ku-Transponder ukuze ishayele isekethe ye-Transponder ukuze ithumele Ikhodi Yomazisi yangaphakathi. Ngalesi sikhathi, uMfundi uthola i-ID. Ikhodi. I-Transponder ikhethekile ngoba ayisebenzisi amabhethri, othintana nabo, namakhadi okuswayipha ngakho ayesabi ukungcola, futhi iphasiwedi ye-chip iyona kuphela emhlabeni engakwazi ukukopishwa, ngokuphepha okuphezulu nokuphila isikhathi eside.
I-RFID inohlu olubanzi lwezinhlelo zokusebenza. Izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile okwamanje zifaka ama-chips ezilwane, i-car chip anti-theft, isilawuli sokufinyelela, isilawuli sendawo yokupaka, i-automation yomugqa wokukhiqiza, nokuphathwa kwezinto. Kunezinhlobo ezimbili zamathegi e-RFID: amathegi asebenzayo namathegi okwenziwa.
Okulandelayo ukwakheka kwangaphakathi kwethegi ye-elekthronikhi: umdwebo wohlelo lokwakheka kwe-chip + antenna kanye nohlelo lwe-RFID
2. Iyini ilebula ye-elekthronikhi
Amathegi e-elekthronikhi abizwa ngokuthi omaka befrikhwensi yomsakazo kanye nokuhlonza ifrikhwensi yomsakazo ku-RFID. Iwubuchwepheshe bokuhlonza obuzenzakalelayo obungaxhunywanwa nabo obusebenzisa amasignali efrikhwensi yomsakazo ukuhlonza izinto okuqondiwe futhi kutholwe idatha ehlobene. Umsebenzi wokuhlonza awudingi ukungenelela komuntu. Njengenguqulo yamabhakhodi angenawaya, ubuchwepheshe be-RFID bunokushisa okungangeni manzi, i-antimagnetic, izinga lokushisa eliphezulu, nempilo yesevisi ende, ibanga elide lokufunda, idatha ekulebula ingabhalwa ngekhodi, umthamo wedatha yokugcina mkhulu, imininingwane yokugcina ingashintshwa ngokukhululeka nezinye izinzuzo. .
3. Buyini ubuchwepheshe be-RFID?
Ukuhlonza ifrikhwensi yomsakazo we-RFID ubuchwepheshe bokuhlonza okuzenzakalelayo okungathinteki, obubona ngokuzenzakalelayo into eqondiwe futhi buthole idatha ehlobene ngamasignali amafrikhwensi omsakazo. Umsebenzi wokuhlonza awudingi ukungenelela okwenziwa ngesandla futhi ungasebenza ezindaweni ezihlukahlukene ezinokhahlo. Ubuchwepheshe be-RFID bungakhomba izinto ezihamba ngesivinini esiphezulu futhi bungakhomba amathegi amaningi ngesikhathi esisodwa, futhi ukusebenza kuyashesha futhi kulula.
Imikhiqizo yefrikhwensi yomsakazo wamabanga amafushane ayikwesabi indawo enzima njengamabala kawoyela nokungcoliswa kothuli. Bangashintsha amabhakhodi ezindaweni ezinjalo, isibonelo, ukulandelela izinto kulayini wokuhlanganisa wefekthri. Imikhiqizo yefrikhwensi yomsakazo wamabanga amade isetshenziswa kakhulu kuthrafikhi, futhi ibanga lokuhlonza lingafinyelela amashumi amamitha, njengokuqoqwa kwe-toll ezenzakalelayo noma ukuhlonza imoto.
4. Yiziphi izingxenye eziyisisekelo zesistimu ye-RFID?
Uhlelo lwe-RFID oluyisisekelo luqukethe izingxenye ezintathu:
I-Tag: Yakhiwe ngezinto zokuhlanganisa nama-chips. Ithegi ngayinye inekhodi ye-elekthronikhi ehlukile futhi inamathiselwe entweni ukuze kukhonjwe into eqondiwe. Umfundi: Idivayisi efunda (futhi ngezinye izikhathi ibhale) ulwazi lwethegi. Idizayinelwe ukuthi ibanjwe ngesandla noma ilungiswe;
I-Antenna: Dlulisa amasiginali wefrikhwensi yomsakazo phakathi kwethegi nomfundi.